यती बैकको सेयर स्वामित्वमा परिवर्तन
काठमाडौ । यती डेभलपमेण्ट बैंकको चौंधौ बार्षिक साधारण सभाबाट पारीत संस्थापक शेयर स्वामित्व परीवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताबलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. तथा सिडिएस क्लीयरीङ्ग ले स्विकृती...
देव बिकासको ४४ करोडको हकप्रद माघको पहिलो साता
काठमडौं, २१ पुुस । देव बिकास बैंकले माघको पहिलो साता ४४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको हकप्रद सेयरको बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ । बैंकले दुुई बराबर एकको अनुपातमा एक सय रुपैयाँ अंकित मुल्य कायम रहने गरी ४...
सेञ्चुरी बैंक घोटालाका संदिग्ध पक्राउ
इटहरी, २० पुस । धरानस्थित सेञ्चुरी बैंकको शाखा कार्यालयमा कीर्ते कागज बनाई करोडौँ रकम घोटाला गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको छ । एक वर्षअघिदेखि उक्त बैंक घोटाला प्रकरण चर्चामा रहँदै आएको थियो । ...
कुमारीले घोषणा गर्यो २१ प्रतिशत बोनस शेयर
काठमाडाैं। कुमारी बैंकले २१ प्रतिशत बोनस शेयर दिने भएको छ । बैंककाे अाज बसेकाे संचालक समितिकाे बैठकले यस्ताे प्रस्ताव गरेकाे हाे । बैंकले गएको आर्थिक वर्षको मुनफाबाट बोनस दिन लागिएको हो । बैंकले ...
नेप्सेमा २६ अंकको उच्च गिरावट, ३९ करोडको सेयर बिक्री – तालिकासहित
काठमाडौं, १९ पुुस । अघिल्लो दुुई दिन लगातार बढेको नेप्से आज मंगलबार भने उच्च अंकले घटेको छ । आज नेप्से २६ दसमलव तीन अंकले घटेर १४ सय ५६ दसमलव ८२ अंकमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ पनि पाँच दसमलव ८४...
नेपाल लाइफको एफपीओ २७ देखि सुरु हुने
काठमाण्डौ । हा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको एफपीओ आगामी पुस २७ गतेदेखि आवेदन दिन पाइने भएको छ । आगामी पुस २७ गतेदेखि एफपीओमा आवेदन खुलाउन लागिएको बिक्री प्रबन्धकको काम गरिरहेको सिद्धार्थ क्...
मेगा बैंकको बोनस स्वीकृत
काठमाडौं, १८ पुुस । मेगा बैंकको बोनस स्वीकृत भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो बैठकले यसअघि मेगा बैंक सञ्चालक समितीले प्रस्ताव गरेको १३ दसमलव २५ प्रतिसत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि शुन्य दसम...
मिर्मिरे माईक्रोफाइनान्सको हकप्रदका लागि प्रभु क्यापिटल बिक्री प्रवन्धकमा नियुक्त
काठमाडौं । मिर्मिरे माईक्रोफाईनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आ.ब. ०७२÷०७३ मा कायम चुक्ता पूँजीको आधारमा १ः०.५० को अनुपातमा साबिकका शेयरधनीलाई जारी गर्न लागेको प्रति शेयर रु.१००÷– का दरले हुने १,५०,००...